Kodzero-dzevanhu, 05 Ndira 2019
Mugovera 5 Ndira 2019
Ndira 05, 2019
Vanhu Voita Mushandira Pamwe Mukutsvaga Zvingapedze Kushandiswa kweZvinodhaka
Baba Cloud Maganga veSt Canisius Church, vaudza vaudza Studio7 kuti musangano wanhasi warongwa mushure mekuona kuti nyaya dzekudhakwa nehwahwa, fodya nezvimwe kwanyaya izvo zvave kukanganisa mugariro wakanaka wevanhu.
Kanzura Kudzai Kadzombe Vanoti Musha Mukadzi
Kanzura anomirira Marlborough (ward 41) mukanzuru yeguta reHarare, Amai Kudzai Kadzombe, vanoti munhukadzi wese anopinda mune zvematongerwo enyika anofanirwa kusimba dzisunge, sezvo basa iri riine zvakawanda zvinoda kushinga.
Hurumende Yoita neMuvhuro Musangano neVarairidzi
Hurumende yadaidzira musangano pakati pebazi rezvedzidzo nevarairidzi nemusi weMuvhuro zvikoro zvisati zvavhurwa nemusi weChipiri.
Nyanzvi Dzoshoropodza Komiti Yakaumbwa naVaMthuli Ncube
Nyanzvi munyaya dzehupfumi uye vari chipangamazano ku United Nations, Doctor Prosper Chitambara, vanoti zvakanaka kuumba komiti iyi asi havaoni paine zvainobatsira nekuti ine vanhu vadomwa kubva mumapazi ehurumende chete.
Hurumende Yomisa Basa Vamwe Vechidiki
Hurumende nemusi weChishanu yakatanga kumisa vamwe vechidiki vange vachishanda mumawadhi ekumamisha kana kuti maYouth Officers basa nechinangwa chekuda kuyedza kuderedza mari iri kushandiswa kubhadhara vashandi vehurumende.
Kanzuru yeChinhoyi Yotsamwisa Vatyairi veDzimotokari
Vazhinji vataura neStudio7 muChinhoyi vanoti nguva dzakawanda vanosungirwa kusapaka motokari zvakanaka vachiti panenge pasina mitsetse yakajeka pavanopaka motokari dzavo.
Hurumende Yokuridzirwa Kugadzirisa Zviri Kunetsa Munyaya dzeHutano
MDC yakurudzira hurumende yaVaEmmerson Mngangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Agreement chekuti hurumende dzose dziri muAfrica dziise mari isiri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kubva pamabhajeti adzo munyaya dzezvehutano.
Musangano weVarairidzi neHurumende Inotadza Kugadzirisa Zvinetswa
Masangano anomiririra vadzidzisi aita musangano nevakuru mubazi rezvedzidzo umo munyori mubazi rezvedzidzo, Amai Tumisang Thabela, vakurudzira masangano aya kuti vanyorerane pasi mashandiro avanoda kuita nebazi rezvedzidzo.
Kuvharwa kweHurumende yeAmerica Kwoenderera Mberi Pasina Kuwirirana.
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, vaita musangano nevakuru vedare reCongress kuyedza kubuda nechibvumirano chekuti mapazi ehurumende akavharwa avhurwe .
Kuramwa Mabasa kwaVana Chiremba Kwava neMazuva Makumi Matatu neMaviri
Vanhu vakawanda vanonzi vari kufa muzvipatara zuva-nezuva sezvo vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nezvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kuita basa ravo.
Varume Vanomwe vekuChina Vanomiswa Mudare reDzimhosva kuVictoria Falls
Zvizvarwa zvekuChina zvinomwe izvi zvakasunga svondo rapera zvichipomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo une chekuita nekuchengetedzwa kwedzimwe mhuka